Re: Bitcoin v0.1 yakabuda | Exonumia
# Re: Bitcoin v0.1 yakabuda
na Hal Finney 2009/01/11open in new window
Satoshi Nakamoto anonyora achiti:
Pakataurwa zvekubuda kwe Bitcoin itsva, electronic cash system itsva ichashandisa peer-to peer network(shamwari ku shamwari) kuitira kuti kutenga kana kutengesa kaviri kusavapo. System iyi iri decentralized,hakuna maservers kana vatongi vanoona nezvemabitcoin(central authority). Enda ku bitcoin.org kuti uone mascreenshots. Download link: http://downloads.sourceforge.net/bitcoin/bitcoin-0.1.0.rar
Makorokoto kuna Satoshi pakuburitsa alpha yekutanga. Ndirikutarisira kuiyedzawo.
Zvinoyevedza kuti system iyi yakagadzirwa kuti pangove nemacoins asingapfuri akarehwa. Ndinofunga kuti basa rinodiwa kugadzira coin itsva richawedzera kana nguva yafamba. Dambudziko rinouya nemari itsva ndeyekuti huremu hwayo hunoyerwa sei. Chero tikamboisa dambudziko rekuti hakuna munhu achaitambira semari pekutanga, pachine dambudziko rekuti tichawanepi nyaya inotsigira huremu hunopfura 0 pamacoins aya.
Sechiitiko chekuvaraidza pfungwa,chimboti Bitcoin yabudirira ikaita iyo nzira yega yekubhadhara zvose pasi rose. Zvinoreva kuti huremu hwayo ndopfuma yese yepasi rose. Parizvino pfuma yepasi rose yavanhu inobva pa $100 trillion ichisvika ku $300 trillion. .Ne 20 million coins, zvinoreva kuti coin imwe inenge iri $10 million.
Saka mukana wekugadzira macoins nemacents enguva yecomputer kunenge kubheja kune hungwaru,kuchizopa mari inosvika 100 million ku 1! Chero mukana wekuti Bitcoin izobudirira zvakadai uri hudiki chaizvo,mukana uyu ungabva waramba zvekuita 100 million ku 1?Chimbopafunga…
← Bitcoin v0.1 yakabuda Ndichachengeta mabitcoin angu (I AM HODLING) →